Homeराष्ट्रिय खबरय सरी भयो महन्थ ठाकुर सभामुख बन्ने प क्का !
काठमाडौं, २१ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राजपा नेपालबीच पछिल्लो समय सकारात्मक वार्ता तथा छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एपेण्डिसाईटिसको शल्यक्रियापछि अस्पतालबाट हिजोमात्रै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा फर्किएका छन् । बालुवाटार फर्किएलगत्तै ओलीले राजनीतिक भेटवार्तालाई तिव्रता दिईरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त छ । कृष्णबहादुर महरा बलात्कार काण्डमा मुछिएपछि सभामुख पद रिक्त भएको हो । अहिले सभामुख चयन गर्नुपर्ने चटारो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको लागि आन्तरिक गृहकार्य गरिसकेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ओलीले यसबारेमा आन्तरिक सहमति बनाईसकेको स्रोतको दाबी छ ।
राजपाको उक्त मागप्रति नेकपाका अध्यक्ष दाहाल सकारात्मक छन् । अर्का अध्यक्ष ओली पनि यसमा सहमत हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्ने तयारी गरिरहेको बेला मधेशवादी दलको समर्थन सरकारमा रहिरहोस भन्ने ओली र दाहालको चाहना छ । त्यसैले पनि नेकपाको नेतृत्व सभामुख राजपालाई दिन राजी हुने बुझिएको छ ।
उता, राजपाका पूर्व संयोजक तथा पूराना नेता महन्थ ठाकुर सर्वमान्य नेताको रुपमा परिचित छन् । नेपालका प्रायः ठूला सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनको भूमिका अग्रणी मोर्चामा थियो । उनको नाममा त्यति विवादपनि नहुने ओली र दाहालको ठम्याई छ । सरकारप्रति मधेशबाट आउने आलोचना र नकारात्मक टिप्पणी मत्थर पार्न महन्थलाई सभामुख दिनेबारे नेकपाभित्र छलफल भएको छ । तर, निर्णय भैसकेको छैन् ।
संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार अहिले नेकपाबाट डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुख छिन् । उनले ओलीले उपसभामुखबाट राजीनामा दिनको लागि गरेको आग्रहसमेत अस्विकार गरेकी छिन् । उनले आफूले नै सभामुख पाउनुपर्नेसमेत माग गरेकी छिन् ।
तेह्रौँ साग: १०६ स्व र्णसहित भारतको अ ग्रता का यमै
tadalafil 10 mg – tadstrong.com online tadalafil
hair growth pills propecia – http://propechl.com/ crackhead propecia
pay for essay writing uk – http://boessay.com/ professional research paper writers
Enbwem – http://virviaga.com/ sildenafil over the counter
Ebuyfk – furosempi.com Xhkqrz lrhsis